အသက် ၂၀ကျော်နေပြီဆို ဒါတွေအတွက် အချိန်ဖြုန်းမနေပါနဲ့တော့…🎀 – Trend.com.mm
တကယ်တော့ အသက် ၂၀ကျော်နေပြီဆိုတာ ရင့်ကျက်သ့င်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရွယ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဒီတော့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုယ်ဘာတွေအတွက်အချိန်ပေးပြီး ဘာတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေမိလဲဆိုတာ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တို့က ကိုယ့်အတွက်အရေးမပါ၊အကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စအတွက် အချိန်တွေပေး၊ငွေတွေပေးနဲ့ကုန်ဆုံးတတ်ကြတယ် (ကိုယ်အပါအ၀င်ပေါ့)။ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုသာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်တွေဖြုန်းနေရင်ကိုယ်တို့ဘ၀မှာပျော်စရာတွေအတွက်၊စိတ်ချမ်းသာကြည်နူးစရာတွေ၊အကျိုးရှိမယ့်အရာတွေအတွက် အချိန်မပေးမိပဲနေပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေမိတယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ ပြောင်းလဲပါတော့လို့ အကြံလေးပြုပါရစေ 🍀
*ဆိုရှယ်မီဒီယာက React နဲ့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်ဆုံးဖြတ်နေတာမျိုး
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က Like အနည်းအများနဲ့ ကိုယ့်ကိုတစ်ခြားသူတွေဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတာ တွေးမိနေပြီလား?အဲ့အတွေးကိုဖျောက်လိုက်ပါတော့။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က React တွေက လက်တွေ့ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘာမှလာလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်သူကတော့ဝင်ငွေပိုရတယ်၊ဘယ်သူကတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုပြီး ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီးနှိုင်းယှဉ်နေမိပြီလား? အကောင်းဆုံးအရာတွေဖြစ်လာဖို့ အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာ၊ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရဖို့သာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အခုတွဲနေတဲ့သူကိုတကယ်မချစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေမှာကိုကြောက်တယ်။တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ရမှာကိုကြောက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်မပျော်ပေမဲ့ ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့သူကိုဆွဲထားတယ်။ဒါက တကယ်ရောပျော်ရွှင်စေရဲ့လား?တကယ်ရော လုံခြုံစေရဲ့လား?ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချစ်ရေးမှာ မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ရတာနဲ့မခြားပါဘူး။အဲ့ဒီအစား တစ်ယောက်တည်းစိတ်ချမ်းသာတာတွေလုပ်နေရတာကပိုကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က မှန်ရဲ့လားဆိုတာ ပြန်ပြီးသုံးသပ်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမရွေးလိုက်မိလို့ မှားသွားပြီလားဆိုပြီး ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကိုပြန်သုံးသပ်စရာမလိုပါဘူး။တကယ်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါ။ကိုယ် ဒါလုပ်ချင်ရင် လုပ်လိုက်၊မလုပ်ချင်ဘူးဆိုမလုပ်နဲ့ပေါ့။ရွေးချယ်နေစရာတောင်မလိုပါဘူး။သူများစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။
*တစ်ခြားသူရဲ့ အမြင်ပေါ်မှာ နေထိုင်နေမိတာမျိုး
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကို လူညံ့တစ်ယောက်လို့ထင်နေမှာစိုးလို့ ကိုယ်က စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊အချစ်ရေးစသဖြင့် အဘက်ဘက်က သင့်တင့်နေပြီဆိုတာသိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ရှိစေချင်ကြတယ်။ကိုယ်က လူညံ့တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်ခြားလူတွေကိုသိစေချင်ကြတယ်။တစ်ခြားသူရဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနော်။သင်က သင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ပြီး ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်မြင်အောင်လုပ်ပါ။သင်ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး သင့်တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။
*ငယ်သေးလို့ အမှားလုပ်မိနိုင်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မနေတတ်သေးဘူးလို့ တစ်ခြားသူတွေပြောတာကို လက်ခံနေမိတာမျိုး
တကယ်တော့ အသက် ၂၀ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲကဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာသိပြီး ဘာကမှန်တယ်၊ဘာကမှားတယ်ဆိုတာသိနေပြီဖြစ်တဲ့ အချိန်ကောင်းအရွယ်ကောင်းပါ။ဒီတော့ တစ်ခြားသူတွေက ကိုယ်ကငယ်သေးလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပြောကြတာကို လက်မခံပါနဲ့။သူက ငယ်သေးတာကိုး။ဒါမျိုးအမှားလုပ်မိတတ်ပါတယ်။ငယ်သေးတာကိုး ဒီလိုမျိုးဘယ်လုပ်နိုင်ပါဦးမလဲစသဖြင့်ပေါ့။အသက်အရွယ်ထက် ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်း၊အစွမ်းအစက ပိုပြီးအရေးကြီးတာမမေ့ပါနဲ့ 💕
တကယျတော့ အသကျ ၂ဝကြျောနပွေီဆိုတာ ရငျ့ကကျြသ့ငျတဲ့အတိုငျးအတာတဈခုအရှယျကိုရောကျနပွေီဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျပါ။ဒီတော့ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ကိုယျဘာတှအေတှကျအခြိနျပေးပွီး ဘာတှနေဲ့အခြိနျဖွုနျးနမေိလဲဆိုတာ။တဈခါတဈလေ ကိုယျတို့က ကိုယျ့အတှကျအရေးမပါ၊အကြိုးမရှိတဲ့ကိစ်စအတှကျ အခြိနျတှပေေး၊ငှတှေပေေးနဲ့ကုနျဆုံးတတျကွတယျ (ကိုယျအပါအဝငျပေါ့)။ဒါပမေဲ့ အဲ့လိုသာ မလိုအပျတဲ့အရာတှနေဲ့အခြိနျတှဖွေုနျးနရေငျကိုယျတို့ဘဝမှာပြျောစရာတှအေတှကျ၊စိတျခမျြးသာကွညျနူးစရာတှေ၊အကြိုးရှိမယျ့အရာတှအေတှကျ အခြိနျမပေးမိပဲနပေါလိမျ့မယျနျော။ဒါကွောငျ့အခုပွောမယျ့အကွောငျးအရာတှနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးနမေိတယျဆိုရငျ ဒီစာကိုဖတျပွီးတဲ့အခြိနျကစလို့ ပွောငျးလဲပါတော့လို့ အကွံလေးပွုပါရစေ 🍀
*ဆိုရှယျမီဒီယာက React နဲ့ ကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျဆုံးဖွတျနတောမြိုး
ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါက Like အနညျးအမြားနဲ့ ကိုယျ့ကိုတဈခွားသူတှဘေယျလိုသတျမှတျလဲဆိုတာ တှေးမိနပွေီလား?အဲ့အတှေးကိုဖြောကျလိုကျပါတော့။ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါက React တှကေ လကျတှကေို့ယျ့ဘဝမှာ ဘာမှလာလုပျမပေးနိုငျပါဘူး။
ဘယျသူကတော့ဝငျငှပေိုရတယျ၊ဘယျသူကတော့အလုပျကောငျးကောငျးရသှားပွီဆိုပွီး ကိုယျ့အခွအေနနေဲ့လိုကျပွီးနှိုငျးယှဉျနမေိပွီလား? အကောငျးဆုံးအရာတှဖွေဈလာဖို့ အခြိနျပေးရတယျဆိုတာမမပေ့ါနဲ့။ကိုယျ့ဘကျက ကိုယျလိုခငျြတဲ့နရော၊ကိုယျလိုခငျြတဲ့အနအေထားတဈခုရဖို့သာ အကောငျးဆုံးကွိုးစားနသေငျ့ပါတယျ။
ကိုယျအခုတှဲနတေဲ့သူကိုတကယျမခဈြဘူး။ဒါပမေဲ့ တဈယောကျတညျးဖွဈနမှောကိုကွောကျတယျ။တဈယောကျတညျးအထီးကနျြရမှာကိုကွောကျတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ကိုယျမပြျောပမေဲ့ ကိုယျ့အနားမှာရှိတဲ့သူကိုဆှဲထားတယျ။ဒါက တကယျရောပြျောရှငျစရေဲ့လား?တကယျရော လုံခွုံစရေဲ့လား?ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့အခဈြရေးမှာ မပြျောရှငျဘူးဆိုရငျ တဈယောကျတညျးအထီးကနျြရတာနဲ့မခွားပါဘူး။အဲ့ဒီအစား တဈယောကျတညျးစိတျခမျြးသာတာတှလေုပျနရေတာကပိုကောငျးပါတယျ။
ကိုယျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြက မှနျရဲ့လားဆိုတာ ပွနျပွီးသုံးသပျနဖေို့မလိုအပျပါဘူး။အထူးသဖွငျ့ တဈယောကျယောကျရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျးမရှေးလိုကျမိလို့ မှားသှားပွီလားဆိုပွီး ကိုယျ့ရှေးခယျြမှုကိုပွနျသုံးသပျစရာမလိုပါဘူး။တကယျတော့ရှငျးရှငျးလေးပါ။ကိုယျ ဒါလုပျခငျြရငျ လုပျလိုကျ၊မလုပျခငျြဘူးဆိုမလုပျနဲ့ပေါ့။ရှေးခယျြနစေရာတောငျမလိုပါဘူး။သူမြားစိတျနဲ့အသကျရှငျနတောမြိုးမဖွဈပါစနေဲ့။
*တဈခွားသူရဲ့ အမွငျပျေါမှာ နထေိုငျနမေိတာမြိုး
တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ကို လူညံ့တဈယောကျလို့ထငျနမှောစိုးလို့ ကိုယျက စီးပှားရေး၊လူမှုရေး၊အခဈြရေးစသဖွငျ့ အဘကျဘကျက သငျ့တငျ့နပွေီဆိုတာသိနတေဲ့သူတဈယောကျယောကျရှိစခေငျြကွတယျ။ကိုယျက လူညံ့တဈယောကျမဟုတျဘူးဆိုတာ တဈခွားလူတှကေိုသိစခေငျြကွတယျ။တဈခွားသူရဲ့အမွငျနဲ့ကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျဆုံးဖွတျဖို့မလိုအပျပါဘူးနျော။သငျက သငျထငျထားတာထကျပိုပွီး ကောငျးမှနျတဲ့သူတဈယောကျပါ။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျခဈြပွီး ကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျမွငျအောငျလုပျပါ။သငျကိုယျတိုငျကလှဲပွီး သငျ့တနျဖိုးကိုဆုံးဖွတျပေးနိုငျတဲ့သူမရှိပါဘူး။
*ငယျသေးလို့ အမှားလုပျမိနိုငျတယျ။ပတျဝနျးကငျြနဲ့လိုကျလြောညီထှဖွေဈအောငျမနတေတျသေးဘူးလို့ တဈခွားသူတှပွေောတာကို လကျခံနမေိတာမြိုး
တကယျတော့ အသကျ ၂ဝဆိုတာ ကိုယျ့စိတျထဲကဘာဖွဈခငျြတယျဆိုတာသိပွီး ဘာကမှနျတယျ၊ဘာကမှားတယျဆိုတာသိနပွေီဖွဈတဲ့ အခြိနျကောငျးအရှယျကောငျးပါ။ဒီတော့ တဈခွားသူတှကေ ကိုယျကငယျသေးလို့ဆိုတဲ့အမွငျနဲ့ပွောကွတာကို လကျမခံပါနဲ့။သူက ငယျသေးတာကိုး။ဒါမြိုးအမှားလုပျမိတတျပါတယျ။ငယျသေးတာကိုး ဒီလိုမြိုးဘယျလုပျနိုငျပါဦးမလဲစသဖွငျ့ပေါ့။အသကျအရှယျထကျ ကိုယျလုပျနိုငျတဲ့အရညျအခငျြး၊အစှမျးအစက ပိုပွီးအရေးကွီးတာမမပေ့ါနဲ့ 💕